तरकारी खेतीमा रमाएका पौरखी किसान – Arthik Awaj
By आर्थिक आवाज	 २०७८ भाद्र ३० गते बुधबार १६:५५ मा प्रकाशित
सुशीला रेग्मी/रामपुर (पाल्पा) । अहो ! तरकारी खेती गर्दागर्दै कति छिटो २६ वर्ष भइसकेछ, मलाई त हिजोआज जस्तै लाग्छ त ? एकराज गौतमलाई तरकारी खेतीमै आफ्नो समय बितेको पत्तो छैन ।
उनि भन्छन्, “तरकारी खेतीबाट राम्रै सफलता पाएँ, छोराछोरीको पढाइ खर्च, घरायसी खर्च राम्रोसँग चलेको छ, निरन्तर लागि परे फाइदा पनि राम्रै छ ।” रोजगारको सिलसिलामा दुई दशक भारतमा बिताउएका गौतमले गाउँ फर्के लगत्तै तरकारी खेती सुरु गरेका हुन् । तरकारी खेतीबाट उनले दाम मात्र नभई समाजमा राम्रो पहिचान बनाएका छन् ।
यसै व्यवसायबाट गौतमले घरायसी खर्च, चार छोराछोरीको पढाइ खर्च राम्रैसँग धानेका छन् । उनि मौसमी तथा बेमौसमी जातका तरकारी लगाएर वार्षिक ६ लाख बराबरको कमाई गर्छन् । “जति कमाई गरेको छु, त्यसमा सन्तुष्ट छु, ५÷७ रोपनी जति जग्गामा तरकारी हुन्छ, अन्य जग्गामा अन्नबाली लगाएको छु, यसमै आनन्दको जीवन जिउन पाएको छु,” गौतमले हँसिलो मुद्रामा भने ।
गौतमले बाह्रैमास विभिन्न जातका तरकारी उत्पादन गर्छन् । घरबाटै धमाधम बिक्री हुने हँुदा व्यवसायमा झन्झट छैन । अहिले उनले टनेलभित्र लगाएको गोलभेँडाको उत्पादन सुरु हँुदैछ भने काउली र बन्दा लगाउने तयारी गरेका छन् । तरकारी उत्पादन हुनु अगावै माग गर्ने हुँदा व्यापारीलाई पु¥याउन नसकिएको उनका श्रीमती टिकीसरा गौतम बताउछिन् । “तरकारीको फल लाग्न सुरु भएपछि टिप्नुभन्दा ५÷७ दिनअघि नै व्यापारीले माग गर्छन्, उत्पादन गरे मात्रै भयो, तरकारी बेच्ने पिरलो छैन,” उनले भनिन् ।
सुरुका वर्ष डोकोमा बोकेर बजारमा पु¥याउने गौतम दम्पती अहिले घरमै गाडी लिएर तरकारी खरिद गर्न व्यापारी आउँदा दङ्ग छन् । श्रीमान् श्रीमतीको दिनचर्या नै तरकारी लगाउने र गोडमेल गर्दैमा बित्छ ।
यस्तै रामपुर नगरपालिका–४ देविस्थानका दिलबहादुर थापाले वैदेशिक रोजगारीको एक दशकको अनुभवपश्चात् गाउँ फर्केर तरकारी व्यवसाय सुरु गरेका छन् । उनले तीन वर्षअघि ‘हाम्रो आधुनिक कृषि फार्म’ दर्ता गरी करिब दश रोपनी जग्गामा तरकारी व्यवसाय थालनी गरेका हुन् । तरकारी खेतीसँगै सयपत्री फूल खेतीमा पनि उनले जोड दिएका छन् । थापाको फार्ममा हाल बोडी, सिमीलगायत तरकारीको उत्पादन भइरहेको छ भने दशैँ तिहार पर्वलाई लक्षित गरी काउली, बन्दा र सयपत्री फूल लगाउएका छन् ।
“दश वर्षसम्म बहराइन बसियो, विदेशको धेरै अनुभव भयो, त्यहाँको पीडा र व्यथा जसले भोग्यो उसलाई मात्रै थाहा हुन्छ, अहिले गाउँ फर्केर तरकारी लगाउन थालेपछि परिवारको साथमा खुसीसाथ जीवन बिताएको छु,” थापाले भने । प्रयोगमा नआएको जग्गा भाडामा लिएर थापाले तरकारी व्यवसाय सुरु गरेका हुन् । अहिले त्यही पत्थरिलो जमिनमा हरियाली तरकारी फलेर लाखौँको आम्दानी होला भन्ने कसैलाई पत्यार लागेको थिएन । त्यही पत्थरिलो जमिनबाट उनले हाल वार्षिक ५ लाख आम्दानी गर्ने गरेका छन् ।
समय अनुसारका तरकारी लगाउन प्रविधि नजान्दा समस्या परेको उनको अनुभव छ । स्थानीय सरकारले अनुदानका कार्यक्रम मात्र नभई किसानलाई दीर्घकालीन समयसम्म टिक्ने प्रविधि दिएमा तरकारीबाट धेरै कमाउन सकिने थापाको अनुभव छ । अब दश रोपनी जग्गा थप गरी २० रोपनीमा तरकारी लगाएर वार्षिक १० लाख कमाउने योजना रहेको अर्का सञ्चालक लालबहादुर थापा बताउछन् । रामपुर नगरपालिकामा पछिल्लो समय व्यावसायिक तरकारी खेतीमा किसान आकर्षित भएका छन् भने धेरै किसान व्यवसायउन्मुख बनेको कृषि शाखा प्रमुख रामहरि पाण्डेय बताउछन् ।
पाण्डेयका अनुसार रामपुर नगरपालिकाले व्यवसाय दर्ता गरेका वा समूहमा आबद्ध किसानलाई उन्नत तथा वर्णाशङ्कर तरकारीको बीउ, तरकारी टनेल, विषादी छर्ने स्प्रेयर, मल्चिङ्ग, थोपा सिँचाइ सेट, प्लाष्टिक पोखरी सिटलगायत कृषिजन्य सामग्री अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । “केही किसानले दीर्घकालीन रुपमा व्यवसाय गर्ने गरी सोही अनुसारको संरचना तयार पारी तरकारी खेतीमा लाग्नुभएको छ, व्यवसायउन्मुख हुँदै गरेका किसानले पनि क्रमश ः जग्गा विस्तार गरी व्यवसायमा लाग्न थालेको पाइएको छ, कार्यालयमा तरकारी खेती गर्न इच्छुक किसान बेलाबेलामा परामर्श लिन आउने गर्नुहुन्छ,” पाण्डेयले भने ।